अर्थमन्त्रीले बजेट पढेको कति पैसा पाउँछन् ? – Agrimpost
मुख्य पृष्ठराजनीतिअर्थमन्त्रीले बजेट पढेको कति पैसा पाउँछन् ?
अर्थमन्त्रीले बजेट पढेको कति पैसा पाउँछन् ?
काठमाडौं– अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दा लाखौ रकम लिने गरेको हल्ला पहिलेदेखि नै चल्ने गरेको छ । तर वास्तविकता के हो भनेर रातोपाटीले बुझ्न खोजेको छ । लाखौ रुपैयाँ लिने हल्लाका बीच पूर्व अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्यौँ तर उहाँहरुले हल्लामा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराए ।